IiNdawo eziValiweyo zokuPholisa uLoop kuShishino lweMveliso: Isishwankathelo
Ukwenziwa kweLimescale kwizixhobo eziBalulekileyo kwicandelo le:
Ephakamileyo / ePhakathi / eQhelekileyo yokuFakwa kweZiko
Ukufakwa kwe-Metal Injection / Gravity
Ngaba kuyonakalisa ukusebenza, ukuSebenza kunye nokuGcina okukhokelela kwilahleko enkulu kula maShishini.
Ukupholisa kumzi-mveliso wokuphosa yinkqubo ebalulekileyo njengoko ichaphazela izinga lokuvelisa kunye nokuzinza kokusebenza komatshini. Ukupholisa kuyafuneka kwi:
1.Induction ukufudumeza kwisekethe yombane (okanye umlilo wamalahle)
2.Ukupholisa umzimba womlilo
Ukunyibilikisa iziko lisebenzisa isithando somlilo esinyibilikisa isinyithi, intsimbi engenasici, okanye ubhedu. Isithando somlilo esifunekayo kufuneka sipholile kwaye sinqande ubushushu obuphezulu kwizixhobo. Ukuba ukuvalwa kombhobho wamanzi, yi-limescale kuphazamisa ukupholisa, oku kuya kwenzakalisa isithando somlilo. Ukupholisa izixhobo ngokufanelekileyo, umgangatho wamanzi ngowona uphambili.
Ubungozi be-limescale kuShishino lweMveliso
Umgangatho olungileyo wokupholisa amanzi kubaluleke kakhulu kushishino lokuphosa. Yisizathu sokuba amanzi acocekileyo asetyenziswe njengamanzi okupholisa kwiziko lokungeniswa.
Inkqubo yokupholisa esebenzisa iNqaba evulekileyo yokuPholisa ngesitshisi sokufudumeza ipleyiti inezinto ezilungileyo nezingalunganga:
Inqaba yokupholisa evulekileyo lixabiso eliphantsi, kunye notyalo mali oluncinci
Inqaba yokupholisa evulekileyo ayinakho ukwahlula i-limescale
Plate sokufudumeza ngempumelelo ubutshabalalisa ubushushu ekuqaleni, kodwa ukusebenza kunciphisa ngaphezu kwexesha.
I-Limescale kulula ukuba yenzeke ngohlobo lweplate
Ihlala indawo encinci ngesitya sokufudumeza ipleyiti
I-Limescale kwisitshisi sokufudumeza inegalelo ekusebenzeni kancinci
Ukuhlamba i-asidi kubangela umonakalo kumatshini wobushushu
Ngombono wexesha elide, uzinzo lwe-SPL yokuvala isekethe yokupholisa inqaba iphezulu kakhulu kunotshintsho lweplate. Ke ngoko, i-SPL ingacebisa ukuba ithathe indawo yenqaba evulekileyo yokupholisa nenqaba yokupholisa yesekethe evaliweyo.
Kukho izibonelelo ezahlukeneyo ze-SPL evaliweyo yesekethe yokupholisa inqaba:
Ukwandiswa kwendawo yokutshatyalaliswa kobushushu, ukunciphisa amandla okubunjwa kwe-limescale
I-2 inceda isidingo sokugcwalisa rhoqo amanzi ukuthintela uxinzelelo lwe-limescale
3.Ukuncipha kwemeko yokuvalwa ebangelwa bubushushu